खोजी ईन्जिनहरूका लागि लेखन रोक्नुहोस् | Martech Zone
खोजी ईन्जिनहरूका लागि लेखन रोक्नुहोस्
बुधबार, मार्च 21, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
मेरो WordPress टेम्प्लेट खोज ईन्जिनहरूका लागि अनुकूलित छ। मैले सावधानीपूर्वक मेरो टेम्प्लेटको संरचना गरें जुन धेरै व्यक्तिहरूबाट केही सुझावहरू सिकेका थिए। पृष्ठ शीर्षक देखि ट्यागसम्म सबै चिह्न गर्न चिह्नित गरिएको छ जति सक्दो म यसलाई बाहिर निकाल्न सक्छु।
मेरो ब्ल्ग टेम्प्लेट कार्यहरू अनुकूलन गर्दछ - लगभग visitors०% मेरा आगन्तुकहरू खोजी ईन्जिनहरूको माध्यमबाट आउँदछन्, मुख्य रूपमा Google। जहाँसम्म मेरो ब्लग खोजी ईन्जिनहरूका लागि अनुकूलित छ, एसईओ विज्ञहरूले ध्यान दिनेछन् कि मेरो पोष्टहरू छैनन्।
म मेरो शीर्षक मेरा पहिलो केहि वाक्यहरूमा दोहोर्याउँदिन। म मेरो पोष्टहरूमा एक टन लिंक को उपयोग गर्दिन। म प्रायः मेरो आफ्नै पोष्टहरूमा लिंक गर्दैन जबसम्म यो सापेक्ष रूपमा सम्बन्धित छ। एक टन पढेको छ एसईओ लेख, म चीजहरूको चेकलिस्ट लेख्न सक्छु कि I गर्नुपर्छ प्रत्येक पोष्टको साथ गर्नुहोस्।
मैले यो गर्ने छैन किनकि म सर्च ईन्जिनका लागि लेखिरहेको छैन, म पाठकहरूको लागि लेख्दै छु। यो केवल मेरो संवादको शैली परिवर्तन गर्न इन्स्केन्सर देखिन्छ ताकि केहि वेब क्रलरमा केही सफ्टवेयर अनुप्रयोगले मेरो जानकारी तान्न सक्छ र कुञ्जी खोजहरूका लागि मेरो लेखहरू अनुक्रमणिका बनाउन सक्छ। मलाई मतलब छैन यदि खोज ईन्जिनले मलाई सजिलो फेला पार्न सक्छ भने ... म ख्याल राख्छु कि पाठकले मेरो ब्लग पोष्टहरूको आनन्द उठाए।
किनकि म ती लेखहरू केहि समयको लागि पढिरहेको छु, अन्य ब्लगर्सहरूले यो गर्दै गरेको बेलामा म साँच्चिकै याद गर्न सक्दछु। ती ब्लगरहरूलाई चेतावनीको एक शब्द मात्र हो - म पढ्न छोड्नुहोस् तपाईका धेरै पोष्टहरू यसको कारणले। अवसरमा, म सदस्यता लिन पनि रोक्दछु।
यी ब्लगरहरूलाई बताउने अर्को तरिका उनीहरूका कमेन्टरहरू हुन् ... तपाईं उनीहरूको ब्लगमा जान प्रत्येक हप्ता फरक-फरक टिप्पणीकारहरू देख्नुहुन्छ। कुनै कुराकानी छैन ... केवल यहाँ एक टिप्पणी र त्यहाँ र पाठकहरू कहिल्यै फर्कदैनन्। म वास्तवमै उस्तै मान्छेहरूलाई मेरो ब्लगमा बारम्बार देखी रमाईलो गर्छु। म मेरा धेरै आगन्तुकहरूसँग साथी बन्न बढेको छु - यद्यपि मैले व्यक्तिगत रूपमा तिनीहरूलाई कहिल्यै भेटिनँ।
तपाईं मार्फत प्रत्यक्ष मार्केटिंग पृष्ठभूमिहरू छन् भनेर जान्दछ कि कुनै पनि माध्यमको अनुसन्धानले तपाईंलाई भन्छ कि नयाँ पाठकहरू प्राप्त गर्न यो अवस्थित छ भनेर राख्नु भन्दा गाह्रो छ। यो एक स्वयं पराजित रणनीति हो जब तपाईं खोजी इन्जिन प्लेसमेन्ट निर्माण गर्न लेख्नुहुन्छ तर तपाईंको पाठकहरूले रमाईलो गर्दैन वा तपाईंको ब्लगसँग टाँसिदैन। तपाईंले खोज ईन्जिनहरूबाट अधिक हिट लिन अप्टिमाइज गर्न र ट्वीक गर्न जारी राख्नुपर्दछ।
खोज ईन्जिनहरूका लागि नलेख्नुहोस्। तपाईका पाठकहरूका लागि लेख्नुहोस्।
फिशर्सबाट चारा चोर्दै
एक ब्लग ब्रेक लिए!
मार्स 22, 2007 मा 1: 02 एएम
सेनिटी जाँच को लागी धन्यवाद 🙂
कहिलेकाहीँ हाम्रो प्रयासमा नियुक्ति हामी त्यहाँ वास्तवमा पाठकहरू छन् भनेर बिर्सने जस्तो देखिन्छ।
मार्क्स 24, 2007 मा 9: 08 PM
म प्रायः मेरो आफ्नै पोस्टहरूमा लिङ्क गर्दिन जबसम्म यो वास्तवमै सापेक्ष छैन।
म प्राय: मेरो आफ्नै पोष्टहरूमा लिङ्क गर्दैन। त्यो किनभने धेरैजसो समय, मेरा पोस्टहरू एकअर्कालाई पछ्याउँदैनन्। तिनीहरू सामान्यतया क्षणको विषयमा मात्र हुन्छन्, अघिल्लो पोस्टहरूमा कुनै जडान (वा थोरै, यदि कुनै) छैन।
अप्रिल 2, 2007 मा 3: 25 PM
मैले एउटा ब्लग सुरु गरेँ र सोचेँ कि म त्यही काम गर्न जाँदैछु, पृष्ठ रैंकहरू प्राप्त गर्न लेख्नुहोस् र यस्तै, त्यसपछि जब मैले लेख्न थालें, यस्तो लाग्यो कि यो म होइन ... किनभने यो थिएन! मैले त्यसपछि भनेँ कि यदि म यो गर्छु भने यो मेरो सर्तमा हुनेछ र अरू होइन। म एक महिनाको लागि मात्र ब्लग गर्दैछु र मलाई यो तथ्य मनपर्छ कि म सम्बन्धहरू निर्माण गर्दैछु र लिङ्कहरू होइन!
अप्रिल 2, 2007 मा 4: 37 PM
धन्यवाद, Latimer! म तपाईको ब्लगमा भर्खरै पुगेँ (मलाई लाग्छ कि हामीसँग साझा साथी छ - JD बाट व्यापारमा कालो। तपाईको ब्लग धेरै सोचविचार गरी लेखिएको छ... तपाईले धेरै विस्फोटक विषयहरूमा छुनुहुन्छ, तर तपाईले सम्मानपूर्वक आफ्नो तर्कको पक्ष प्रदान गर्नुहुन्छ र विषयलाई छलफलको लागि खुला छोड्नुहुन्छ।
मैले ब्लगस्फेयरमा तपाई के बारे धेरै लेखहरू पढें गर्नुपर्छ गरिरहनु भएको छ... र मलाई स्पष्ट रूपमा लाग्छ कि यो धेरै जसो BS हो यो कसैलाई कसरी उनीहरूले भन्नु जस्तै हो गर्नुपर्छ एक अपरिचित संग कुराकानी गर्नुहोस्।
द्वारा रोक्न र टिप्पणी गर्नुभएकोमा धन्यवाद!
अप्रिल 2, 2007 मा 5: 11 PM
डग द्वारा रोक्नको लागि धन्यवाद, मैले मेरो ब्लगमा भनें म सधैं सबै विचारहरू सुन्न खुला छु र हामी कुनै पनि मुद्दामा बुद्धिमानी छलफल गर्न सक्छौं। एक पटक फेरि टिप्पणी को लागी धन्यवाद।
अप्रिल 3, 2007 मा 3: 29 PM
म तपाईलाई थाहा दिन चाहान्छु कि तपाईले यस पोष्टमा के भन्नुभएको छ मलाई साँच्चै आनन्द लाग्यो। मैले भर्खरै एक महिना अघि मेरो ब्लग सुरु गरेको छु र म यो कुरा कसरी गर्ने भनेर सिकिरहेको छु, त्यसैले तपाईंको सल्लाहले वास्तवमै मद्दत गर्दछ किनभने यो सत्य हो। यद्यपि म यो एक मिनेटमा मात्र भएको छु, मैले गणनालाई टक्कर दिन जे पनि गर्ने प्रलोभनसँग लड्नुपर्‍यो। यो क्र्याक लत जस्तै हो वा केहि, तपाईंलाई थाहा छ? थप पाठकहरू, मसँग मात्र थप पाठकहरू हुनुपर्छ।
तर अब म तपाईको पोष्ट पढ्छु र यो सबै मलाई फर्कन्छ, मेरो दिमागको पछाडि कैद भएको त्यो सानो आवाज जस्तै। जसलाई सार्थकताको लागि सजाय दिइयो। "तपाइँलाई के थाहा छ बोल्नुहोस्, तपाईले भन्नु भएको जस्तै भन्नुहोस्, र तिनीहरू आउनेछन्।"
माफी सहित, निस्सन्देह, "सपनाको क्षेत्र" मा।
अप्रिल 3, 2007 मा 5: 08 PM
धन्यवाद, किथ। मलाई लाग्छ कि सबैजना (ब्लगिङ बाहिर पनि) मान्यता खोज्छन्। म पनि कहिलेकाहीँ यो मेरो एसईओ, लिङ्कहरू, डिगहरू, इत्यादिलाई कसरी असर गर्छ भनेर सोच्दै लेखिरहेको पाउँछु। मैले यो पोस्ट लेख्नुको एउटा कारण भनेको राख्नु थियो। आफैलाई लाइन मा पनि!
अप्रिल 3, 2007 मा 5: 53 PM
राम्रो पोस्ट। म खोज इन्जिनहरूको लागि लेख्न को लागी प्रयास गर्दैन, तर मैले स्वीकार गर्नुपर्छ कि म यसको बारेमा सोच्दछु। मेरो पोष्टहरूको केही शीर्षकहरूमा (यदि यो एक प्रमुख घटनासँग सम्बन्धित छ भने), म शब्द हो त्यसैले यो खोज इन्जिनहरू द्वारा उठाउन सकिन्छ। म यो गर्दिन ताकि म साइटमा धेरै आगन्तुकहरू हुन सक्छु (मसँग मेरो अहंकार खुवाउने अन्य तरिकाहरू छन्)। म यो गर्छु किनभने म चाहन्छु कि मानिसहरूले मैले भनेको कुरा पढून्। आशा छ उहाँहरू फर्केर छलफलमा भाग लिनुहुन्छ। ब्लगिङ रमाइलो छ। मैले केही महान व्यक्तिहरूलाई भेट्न पाउँछु र प्रक्रियामा धेरै कुराहरू सिक्न सक्छु।
अप्रिल 3, 2007 मा 9: 40 PM
विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, तपाइँ वास्तवमा खोज इन्जिनहरू र तपाइँका पाठकहरूको लागि लेख्न सक्नुहुन्छ।
मलाई कुनै पनि/वाको सट्टा/र दुवै सोच्न मन पर्छ।
अप्रिल 3, 2007 मा 9: 59 PM
कुनै मौका छ कि म तपाईंलाई यस्तो प्रदर्शन प्रदान गर्न चुनौती दिन सक्छु? मलाई शंका छैन कि यो सम्भव छैन - मलाई लाग्छ कि त्यहाँ दुबै गर्ने तरिकाहरू छन्। यद्यपि, म कुनै उदाहरणहरू पहिचान गर्न सक्दिन। (सायद यो किनभने लेखकले दुबै प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने यस्तो राम्रो काम गरे।)
म राम्रोसँग लेखिएको अनियमित पोष्ट हेर्न र यसलाई राम्रोसँग लेखिएको र खोज इन्जिनहरूको लागि प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने पोष्टसँग तुलना गर्न चाहन्छु।
अप्रिल 4, 2007 मा 7: 49 एएम
हे डग -
पूर्ण रूपमा आत्म-बधाईपूर्ण आवाजको जोखिममा, यहाँ मैले सिर्जना गरेको एउटा टुक्रा हो जसले राम्रो खोज इन्जिन ट्राफिक प्राप्त गरिरहेको छ र जुन मेरा नियमित पाठकहरूले पनि रमाइलो गरेका छन्:
गुनासो नगर्ने ब्रेसलेट नियमहरू: के तपाइँ तिनीहरूलाई टाँसिरहनुभएको छ?
मसँग त्यस्ता केही छन् - महिमा केवल भगवानको होस्!
यद्यपि म स्वीकार गर्छु कि मलाई थाहा छ तपाईको मतलब के हो - कहिलेकाहीँ म मेरा नियमित पाठकहरू भन्दा SEO को पक्षमा धेरै तिरस्कार गर्छु, तर म खुसी छु कि मेरा नियमित पाठकहरू अझै पनि फिर्ता आउँदैछन् किनभने उनीहरूले मलाई मन पराउँछन्।
म संग छु जस्तो छ इल्कर योल्डासको TheThinkingBlog.com: म यसलाई पढिरहन्छु किनकि मलाई उहाँ मनपर्छ, त्यसैले उसले SEO लेख्न सक्छ र म अझै पनि उहाँको नियमित पाठकको रूपमा त्यहाँ हुनेछु!
ख्याल राख्नुहोस् र प्रतिक्रियाको लागि धन्यवाद,
अप्रिल 4, 2007 मा 10: 10 एएम
धन्यवाद, पाउला। आशा छ, तपाईंले यसलाई सही तरिकाले लिनुहुन्छ - तर मलाई लाग्छ तपाईंले वास्तवमा मेरो आधारलाई समर्थन गर्न मद्दत गर्नुभयो। तपाईंले पहिले केही खण्डहरूमा धेरै पटक "गुनासो नगर्ने ब्रेसलेट" को उल्लेख मात्र साँचो हुदैन - तपाईले मसँग कुरा गर्नुको सट्टा एसईओ प्राथमिकतामा रहेको जस्तो देखिन्छ।
पोस्ट एकदम राम्रो छ, कृपया मलाई गलत बाटो नलिनुहोस्। तर5वर्षमा जब खोज इन्जिनहरूले उनीहरूको लागि लेख्न आवश्यक बिना सामयिक डेटा फैलाउन सक्छन् - के यो पोष्ट लेख्ने प्राकृतिक माध्यम हुनेछ?
विडम्बना, म गएँ सोच ब्लगमा यो पोस्ट र पहिलो अनुच्छेद छ 21 उसको ब्लगमा गहिरो लिङ्कको लागि यसमा नि: शुल्क लिङ्कहरू। ती लिङ्कहरू विशुद्ध रूपमा खोज इन्जिनहरूका लागि हुन्, तपाईं र मेरो लागि होइन।
सबै उचित सम्मान संग!
अप्रिल 4, 2007 मा 10: 14 एएम
कुनै अपराध लिइएको छैन; मेरो पोस्ट पढ्न को लागी धन्यवाद।
र हो, पक्कै पनि म गर्दिन दोहोर्याउनुहोस् र बोल्ड महत्त्वपूर्ण SEO वाक्यांशहरू यदि म मानिसहरूले तिनीहरूलाई भेट्टाउन चाहन्न।
काश, SEO'er को जीवन यस्तो छ ...
मलाई आश्चर्य छ कि कसरी सम्पूर्ण SEO-Google खेल भविष्यमा परिवर्तन हुनेछ।
यो एक आकर्षक सवारी हुनुपर्छ ...
अप्रिल 4, 2007 मा 10: 23 एएम
वाह! डबल वाह! धन्यवाद पाउला।
जनवरी 23, 2008 4:20 बजे
यो पोस्ट पढ्नुहोस् र कति समय सान्दर्भिक। मैले गत हप्ता एउटा बैठक छोडेको थिएँ जसमा एक सहकर्मीले हाम्रो वेबसाइटहरू पाठकमैत्री छैनन् भनी "यी पृष्ठहरू पाठकहरूका लागि होइनन्" भनी जवाफ दिए। यी पृष्ठहरू खोज इन्जिनहरूका लागि हुन्।" मलाई मेरो टाउको खरानी बनाइयो कि हामी अप्टिमाइजेसनको बाटोमा यति धेरै तल पुगेका थियौं कि कसैले वास्तवमा पृष्ठहरू मानिसहरूले नपढ्ने मनपर्छ। मन छोयो । जानकारीमूलक सामग्री सिर्जना गर्दा तपाईले सकेसम्म अनुकूलन गर्नुहोस् विदेशी विचार जस्तो देखिन्छ। भन्न आवश्यक छैन, मैले यो पोष्ट मेरो कम्पनीका केही व्यक्तिहरूलाई पठाएको छु।